Ceelgows.com » Sports
Gaalkacyo Oo Dib U soo celisay sharaftii Ciyaaraha Kolayga ee soomaaliya.(warbixin).
- May 5, 2013	Tartanka koobka Basketballka ee magaalooyinka Bariga iyo Bartamaha Geeska africa oo si habsami leh uga soconayay magaalada kampala ee dalka uganda ayaa la gaaray lugtiisi ugu danbaysay iyodoona dalka soomaaliya ay uga qayb galeen magaalooyinka muqisho iyo gaalkacyo.
Gudiga koobka Hogaaminayay ayaa amaanay qaab ciyaareedka ciyaaryahanadii ka socday Magaalada gaalkcyo oo afar dhamaadka koobka looga... Tags: gaalkacyo Gaalkacyo: Falanqaynta Ciyaarta Fiinal ee Galabta Telecom Vs Comsed
- Feb 8, 2013	Telecom iyo Comsed
Waxaa qorshaysan in Galanta ay dhacdo ciyaartii kama danbaysta ahayd ee koobka tayeynta Dhalinyarad ee Gobolka Mudug, waxaan Fooda Isdari doona Telecom iyo Comsed.
Xiisaha goonidaa ay ciyaartu leedahay.
Labada Kooxood oo kamid ah 5ta kooxood ee ugu waweyn Gobolka Mudug iyo Puntland ayaa waxaa ka dhexeeya xifaaltan aad u adag, waxaana ay isu adeegsadaan dhamaan wixii ciyaar yahano... Tags: TIGAY GAALKACYO Gaalkacyo: Groupka A oo lagu kala baxay wareegii labaad ee Koobka tayeynta dhalinyaradda.
- Jan 29, 2013	Koobka tayeynta Dhalinyardda Gobolka Mudug ee ka soconayey magaaladda Gaalkacyo ayaa waxaa uu ugudbay wareegii labaad ayad oo ay isku soo hareen 6kooxood.
Group A ayaa ilaa ilaa iyo hadda lagu kala baxay waxaana groupkaas ku wada Jiray kooxah Homboboro, Yamays iyo RPS, waxaana groupkaas kasoo baxay Kooxaha RPS iyo Yamayska kadib markii Kulankii labaad kaga takhalusay kooxda Homboboro.
Kulankii... Tags: gaalkacyo Kooxo kubadda cagta Mudugu ee soo baxay ciyaaraha kala harka tartanka
- Jan 24, 2013	Kooxo kubadda cagta Mudugu ee soo baxay ciyaaraha kala harka tartanka Kooxo u soo baxay ciyaaraha kala harka tartanka kubadda cagta ee Mudug.
Tartanka kubadda cagta gobolka Mudug oo toddobaadyadii ugu danbeeyay ka soconayay garoonka Cawaale ee Gaalkacyo ayaa waxaa ciyaarihiisii kala harka waxaa u soo baxay lix kooxood oo kaliya, halka ay ka hareen affar kooxood.
Lixdka kooxood ee u soo baxay wareegga... Tags: TIGAY GAALKACYO Gaalkacyo: RPS Vs Shaambalaas maxaa kala qabsay.
- Jan 21, 2013	Maanta ayaa waxaa garoonka Ciyaaraha ee Cawaale ka dhacday ciyaar aad u adag taas oo ay isku arkeen Labada Kooxood ee Shaambalaas iyo RPS.
Inkasta oo ay labada kooxoodba muujiyeen dadaal dheer ahadan waxaa ay Kooxda Shaamblaas isku dayeysay in ay guul ciyaartaan ka gaarto, halka kooxda RPSna ay doonaysay in ay hesho bar baro, si ay u xaqiijiso in ay usoo gudubto wareega labaar ee kulamadda mar is araga... Tags: gaalkacyo Gaalkacyo: Ciyaartii Yamayska Vs Shaambalaas ee galabta iyo 11ka ciyaar yahan ee Asbuuca oo lasoo bandhigay(Warbixin).
- Jan 17, 2013	IGAR business Center
Koobka tayeynta ciyaar yahanadda sanadkaan oo kasocda garoonka Cawaale ee magaaladda Gaalkacyo, ayaa waxaa uu dhexda kaga jiraa wareegiisii 2aad.
Kooxda Kubadda cagta ee Yamayska Ayaa galabta guul ka gaartay kulankeedii ay la lahayd kooxda Shaam balaas, kadib markii ay ku garaacday 2-0, waxaana aytani kalsooni siinaysaa Kooxda Yamayska oo groupka B,kasoo baxday.
Intii... Tags: ciyaaro gaalkacyo Gaalkacyo: Kooxaha Telecom iyo Comsed oo ka Soobaxay Group A iyo ganaxyo aysoo saareen Xiriirka kubbadda cagta ee Gobolka Mudug (Warbixin)
- Jan 16, 2013	<IGAR business Center Gaalkacyo>
Koobkii tayeynta sportiga Gobolka Mudug oo ka soconaya garoonka Cawaale aytaa waxaa uu marayaa meel aad u wanaagsan jawi fiicanna usocda.
Labada kooxood ee Telecom iyo Comsed ayaa waxaa ay gaareen guulo, waxaana ay kasoo bexeen grouka A, kadib markii ay kooxda Telecom 1-0 nku khaarajisay kooxda Dh.Y.Cartan, Halka Comsed ayaduna aysaas oo kale 1-0 ku... Gaalkacyo: F.C. D/hoosee oo Ciyaartii ugu Shacabka Badnayd ku dubatay Homboboro F.C.
- Jan 15, 2013	<IGAR Business Center> Garoonka kubbadda cagta ee Cawaale ayaan waxaa galabta ka dhacday ciyaar aad u xiiso badnayd, waxaana fooda isku Daray F.C. D/hose Vs Homboboro F.C waxaana ay hayd ciyaartii ugu shacbiyadda badnayd ee Garoonka ka dhacday.
Kulankaan oo ay dadku wada sugayeen ayaa waxaa uu ahaa kulan aad looga dhur sugayey, ay daawadayaashu Maalinweyn sii goosteen tkidka garoonka, waxaana... Tags: ciyaaro gaalkacyo Gaalkacyo: FC. RPS oo Yamska 9ciyaar yahan kaga keensatay 3 gool, 6daqiiqo gudahood. (Warbixin+Sawiro)
- Jan 14, 2013	Maanta ayaa waxaa ciyaar xiisa badan ay dhex martay labada kooxood ee Yamays iyo RPS, waxaana ay soo bandhigeen iyaartii ugu xiisaha badnayd ciyaarihii dhacay.
Labada Kooxood ayaa waxaa ay soo bandhigeen ciyaar kulul inkasta oo Intii hore ee ciyaarta ay xoog iyo xeelad badnaayeen F.C.Yamays, ayaa hadan waxaa dadaal badan Sameeyey Kooxda RPS, waxaana ay muujiyeen niyad iyo adkaysi farabadan.
Kooxda... Tags: gaalkacyo Koobka tayeynta ciyaar yahanadda Gobolka Mudug oo Galabta Furmay (Dh.Yasin Cantar Ex-Fuluja Vs Comsed) Sawiro.
- Jan 11, 2013	Koobka tayeynta ciyaar yahanadda gobolka Mudug ayaa maanta waxaa uu ka furmay garoonka kubbadda cagta ee Cawaale Stadium ee magaaladda Gaalkacyo.
Kulankii ugu horeeyey ayaa waxaa uu maanta dhex maray 2kooxood ee kala ah Dh.Yasin Cartan (Faluja) Vs Comsed, waxaana ay ciyaar taani ahayd mid aad u xiiso badan oo ay usoo daawasho tageen dadweyne aad u farabadan.
Ciyaarta ayaa waxaa ay kusoo dhamaatay... Tags: gaalkacyo Next »	Ka Raadso warkii	Custom Search